Wareysi: Wasiirka Ganacsiga Dowladda Federaalka | Mogadishu Center
Home / Maqaallo / Wareysi: Wasiirka Ganacsiga Dowladda Federaalka
Posted by: Editor2 May 25, 2016	in Maqaallo, Warar Leave a comment
25 May 2016 (MCRS) Xarunta Muqdisho ee Cilmibaarista & Daraasaadka ayaa fursad u heshay in ay wareysi dhinacyo badan taabanaya la yeelatay Wasiirka Ganacsiga iyo Warshadaha ee Dowladda Federaalka ee Soomaaliya Eng Cabdirashiid Maxamad Axmed. Wareysiga ayaa u dhacay sida soo socota:
Muqdisho: Ugu Horeyn Wax inooga sheeg Taariikh Nololeedkaaga? Goormaad Xilkan Qabatay?
Wasiir Cabdirashid: Waad Mahadsan tahay. Hore ayaan idiinkugu soo gudbiyey balse aan kuu guudmaro Waxaa la I yiraahdaa Eng: Cabdirashid Maxamad Axmed Waxaan Xilkaan Qabtay Bishii November sanadkii hore. Hore waxaan u ahaa Wasiirka Howlaha Guud ee Koonfur Galbeed. Waxaan ka mid ahaa dadkii Soomaaliyeed ee aanan ka tagin Dalka Waxaanan ahaa Ganacsade intaanan Siyaasadda soo gelin Intaas ayaana la dhihi karaa waa kugu filan yihiin dhanka Taariikh Nololeedkeyga.
Muqdisho: Waxaad 1 & 2 Nooga sheegtaa Waxqabadka ugu muhiimsan ee Wasaaradda intii aad Joogtay?
Wasiir Cabdirashid: Mudadii aan joogay waxqabadkeena wuu fiicnaa waxaana ka taaban karaa inaan ka qeybgalnay shirkii Shiinaha iyo Afrika ee ka dhacay Dalka South Africa oo ahaa mid kusoo dhamaaday is faham waxaana socda hanaankii lagu maalgelin lahaa dalka. Waxaan sidoo kale isku daynay inaan ka mid noqono ururka Ganacsiga Aduunka oon u gudbinay Codsi ka mid ahaansho ah oo uu Madaxweynaha inoo qoray anaguna aan gudbinay. Shirka Maalgashiga Soomaaliya & Turkigana waan ka mid noqonay kasoo hordhac u ahaa shirka siyaasadda. Waxaan ka qeybgalnay shirkale oo talyaaniga aan kala hadalnay dhaqaalaha iyo iskaashiga ganacsiga labada dal. Sidoo kale Dalka Masar oon heshiis kale la galnay. Dadaalada aan wadno waa isdaba socdaan mana kala yara oo waxaan isku dayeynaa Isbadal iyo Horumarin Joogto ah.
Muqdisho: Waxaa kale ood inoo taabataa WaxQabadka Dalka Gudihiisa aad ka sameyseen?
Wasiir Cabdirashiid: Waxaan wax ka qabanay sida loo bixinaayo Ruqsadaha Shaqada sida loo bixiyo iyo sharciyada la xiriira. Waxaa la meelmariyey sharciga maalgashiga shisheeye dhinaca kale waxaa jirtay UNka oo shirkado maxali aan aheyn siin jiray mashruucyada waxaan ku qasabnay inay wax ka badalaan oo ay kuwa gudaha dalka ah siiyaan Mashruucyada dhinacyadiisa kale duwan taasoo keeni doonta fursado shaqo abuur ah iyo koboc dhaqaale.
Muqdisho: Waxaad Warbixin naga siisaa dhinaca bixinta warqadaha sharciga ah sida shatiyadda iyo sida aad ku bixisaan?
Wasiir Cabdirashiid: Wuu noocyo badan yahay shatiga oo waxa jira mid dhoofin iyo soo dejin, mid adeeg guud ah, Shati Ganacsi guud ah baa jira, iyo shati warshad intaba waan bixinaa ka wasaarad ahaan. Waxaa jiro hanaan loo maro bixintiisa waxaana intaa kadib ay nagu qaadataa in aan ku bixino saacaddo dhowr ah.
Muqdisho: Dhanka Maalgashiga hadii aan u kacno bal Muxuu Shiinaha ka geystay dhanka Maalgashiga dalka?
Wasiir Cabdirashid: Shiinuhu wuxuu ahaa dalkii ugu Maalgashiga badnaa Soomaaliya intii aysan Dowladii dhexe inaga burburin. Waxbadan oo dalka ay ka qabteen oo la xusi karo ayaa jiro (Wadada isku xirta Beledweyn-Burco iyo Stadiumka iyo Theatreka Qaranka) Waxaas oo idilna diyaar ayey u yihiin inay soo celiyaan. Gudiyo ayaa jira ka shaqeynaya intaas oo howl wadareed ahba.
Muqdisho: Dhanka Warshadaha wax inooga sheeg Mudane?
Wasiir Cabdirashiid: Wasaaraddan waxaa ay ka kooban tahay Ganacsiga iyo Warshadaha Waxaana Horumar Ganacsi uu imaan karaa marka la helo Warshado Dalka gudihiisa ka howlgala waxaana taasi ay dhalisaa wax soo saar Maxali ah oo marka uu dalka warshado leeyahay keenayo horumar Dhaqaale. Dowladda iyo Wasaaradda waxey dhiirigelineysaa Abuurista iyo horumarinta warshadaha iyo xiriirka dowladda iyo Ganacsiga gaarka ah. Maalgelinta Warshadahana waan dhiirigelineynaa inkastoo ay yaryihiin hadana waxaa jiro warshado badan oo ka shaqeeya dalka waana dhiirigelineyna ka wasaarad ahaan.
Muqdisho: Inta haatan idiin harsan Maxaad is leedihiin ood rabtaan inaad Qabataan ka Wasaarad ahaan?
Wasiir Cabdirashiid: Waxyaabaha ugu muhiimsan inaan qabano waxay noqon doonaan wixii howshii naloo igmaday ka harsan oon isleenahay waxaa ka mid ah sharciyo dhowr ah oo ay ka mid yihiin sharciyo canshuuraha, sharciga shirkadaha iyo Siyaasado Ganacsi iyo Dhiirigelinta maalgashiga iyo Warshadaha ah. Waxaan rabnaa in Dowladda soo socota ay ku shaqeyso iyada oo howshii naloo igmaday ay tahay mid u fududeysa shaqadooda Mustaqbalka.
Muqdisho: Waa Sidee Qaab-Dhismeedka Wasaaradda?
Wasiir Cabdirashiid: Wasaaradda waxey ka kooban tahay saddex qeybood (1) Ganacsiga (2) Warshadaha (3) Maalgeshiga intaas oo dhan ayey tahay howsheeda waxaa qaabdhismeedka yahay Wasiir ilaa Agaasimo Waaxeedyo. Waxey ka kooban tahay 9 waaxood iyo Xoghaye iyo Agaasime Guud Wasiir ku Xigeen iyo Wasiiru Dowle.
Muqdisho: Maamul Gobaleedyada dalka xiriir mala leedihiin?
Wasiir Cabdirashiid: Maamuladda waxey u dhisan yihiin habab Dowli ah oo waxey leeyihiin wasaarado Ganacsi iyo Warshado sidoo kale Rug Ganacsi oo isku keenta Shirkadaha iyo Warshadleyda kala duwan. Xiriirkeenu wuu wanaagsan yahay waxaan sameynaa kulamo iyo shirar joogta ah. Waxaan sidoo kale xiriir la leenahay Rugta Ganacsiga Qaranka.
Muqdisho: Xiriirka Ganacsi ee Dalalka Jaamacadda Carabta Wax inooga sheeg?
Wasiir Cabdirashiid: Xiriirkeena Ganacsi wax walba oo dhacaba waa lagu mideysan yahay ganacsiga oo idil. Wadamada noogu badan ka dal ahaan waa kuwo carabta sida Sucuudiga, Masar iyo Imaaraatka.
Muqdisho: Ganacsiga Xoolaha Warbixin naga sii?
Wasiir Cabdirashiid: Inkastoo lala kulmo Xayiraado iyo Dhib badan hadana horumar wanaagsan ayaa ka jira dhanka Ganacsiga Xoolaha oo ah mid aad uu dalka ugu wanaagsan yahay. Sanadkii hore waxaa dalka laga dhoofiyey 5 milyan oo neef ah. Cuman, Masar iyo Imaaraatka ayaana loo dhoofiyey badanaa. Xiriirkana waa mid noocyo badan yahay. Sidoo kalena waxaa dalka uu xiriiro la leeyahay Turkiga oo shidkadahoodi iyo Maalgashigooda ay qeyb ka qaateen dalka. Shirkado dhowr ah oo Dakada iyo airportka gacanta ku haya ayaa sidoo kale jira.
Muqdisho: Caqabada ugu badan ee dalka heysata dhanka ganacsiga ka waran?
Wasiir Cabdirashiid: Waa jiraan waxaana Caqabada ugu weyni tahay dhibaatada ka jirta dhanka Tayada taas oo ah mid u baahan in si wanaagsan loo tayeeyo. Waxaa sidoo kale u baahan fiirinta iyo koontaroolida tayada alaabta soo gasha dalka iyo kuwa baxa oo ah dhib iyo caqabad balaaran.
Muqdisho: Aad baad u Mahadsan tahay Mudane
Wasiir Cabdirashiid: Adigaa Mudan
Previous: Duqa Muqdisho oo la kulmay Dhigiisa Istanbul
Next: Guddiga Madaxa Banaan ee doorashooyinka Qaranka oo ka hadlay Erey bixinta Doorashada